Shaqadu kaliya ma istaagto maxaa yeelay heerkulku wuu sii dhacayaa, laakiin haddii aan la helin labada gacmo-gashi ee saxda ah, waxay noqon doontaa mid aad u xanuun badan in la dhammaystiro shaqada qabowga. Waad ku mahadsan tahay dahaadhka, dahaadhka biyaha iyo dabacsanaanta weyn ee galoofyada shaqada ugu fiican jiilaalka, qalabka qabow iyo faraha adag ma noqon doonaan ...
Koofiyad la tolay
Haddii aad ku nooshahay jawi qabow, shaki kuma jiro in digirta ama koofiyadaha laysku tolay ay yihiin qayb muhiim ah oo ka mid ah dharkaaga dharka qaboobaha. Laakiin haddii aad rabto inaad xirato koofiyad diiran ama inaad ku darto dareen mood, sannadkan (iyo sannadihii la soo dhaafay) waxay umuuqdaan inay koofiyad xiran yihiin. The Carhartt Ragga Acrylic Watch Cap waa ...
Baarayaasha jaamacada Harvard waxay ogaadeen in dadka guuleysta ay inta badan muujiyaan u janjeera inaysan raacin dhaqanka. Tusaale ahaan, adduunyada ganacsiga halista ah, dadku waxay u muuqdaan inay xirtaan sharaabaadyo dhalaalaya. Daraasadan oo loogu magac daray "Saameynta Sneaker Cas" ayaa baareysa falcelinta dadka ee ku aadan p ...